Maitiro ekugadzira bootable USB kubva kuLinux, nyore uye nekukurumidza | Linux Vakapindwa muropa
Unoziva here kuti chii a Inotakura USB? Kutakura yatinofarira mashandiro sisitimu kana edu epamoyo mashandiro masystem muhomwe yako akanaka uye anonyatsogadzikana. Kunyanya kana ichizivikanwa BYOD (Hunza Chako Chako mudziyo), kureva "uya neako mudziyo." Izvo zvakanyanya kusununguka kutakura pendrive pane yakazara komputa. Uye kwete izvo chete, iwe unogona kufarira kuve nekufamba uye kunyaradzwa kweRarama, asi nemukana wekuchengetedza masisitimu uye shanduko, izvo zvinokutendera iwe USB ndangariro.
Icho zvakare hachisi chakaipa zano kana iwe uri wekuchengetedza odhita kuti umhanye yako wega kugovera kana zvishandiso pane pendrive, kana kupenga kana ukazvipira kugadzirisa michina. Nyanzvi inogona kuve neLinux zviyero zvakagadzirirwa kuongorora nekugadzirisa zvishandiso mupeni imwe chete, ichipa sosi yezvishandiso nekutakura zvizere uye kuzvimiririra kubva kumidziyo yatinoshandisa. Muchidimbu, chero basa rako, iro ratidziro ratiri kupa rinokupa kufamba kwakazara.
Sezvandataura, have LiveCD kana LiveDVD Iyo sarudzo yakanaka kushandisa zvimwe zvishandiso kana kumwe kugoverwa kweLinux chero nguva yakatarwa, kurirodha kubva ku RAM ndangariro yemidziyo yedu pasina kuzviisa, uye pane chero chinhu. Asi chii chinoitika kana komputa yatiri kuda kutanga iyo system isina muverengi wekuverenga, sezvinoitika kumakomputa mazhinji emazuva ano anotakurika, kana chii chinoitika kana tichida kusevha imwe data kana kumisikidzwa, sezvo chiyeuchidzo cheROM icho rutsigiro rwekuona harutenderi, asi flash memory rinoitendera.
Naizvozvo kuchinjika kwekuva neye bootable USB ndangariro nemaitiro edu atinofarira ekushandisa kana distros uye kugona kuverenga shanduko zvinoramba zviripo ndezvinobatsira (patinobvisa pendrive kubva kuchiteshi che USB, zvese hazvizodzimwa sezvazvinoitika pakubvisa iyo CD / DVD Live, sezvo RAM isingachinjiki). Ehe, ini ndinotaura muhuwandu sezvo uchigona kuve neakasiyana masisitimu anoshanda mune ye USB ndangariro sekunge yaive yechinyakare hard disk. A bootable pendrive ine multiboot Uye izvi ndizvo chaizvo zvatinozokutsanangurira iwe maitiro ekuzviita nhanho nhanho kubva kune yako Linux distro.
Uye zvakare, kune vashandisi vanofanirwa kuve ne pendrive ye gadza Linux kubva kuUSB kana yeWindows 10 yekuisa pane chero PC, ingave iine optical drive, kana iwe uchawanawo chinonakidza chikamu mune ino chinyorwa. Windows 10 yakakura uye vagadziri vazhinji vanga vachifarira kana kukwezva nekubatanidzwa uko kwakaitwa neMicrosoft kweBash mune imwe yazvino Zvivakwa kana zvigadzirwa. Kana iwe uchida kushandisa Bhash, iyo "bit" yeUbuntu mukati Windows 10, iwe unowana zvakare gwara.
1 Zano redu rekugadzira Bootable USB
2 Gadzira iyo Bootable USB neako aunofarira distros
2.1 Dhawunirodha uye gadza MULTISYSTEM
2.2 Shandisa MULTIBOOT
2.3 Chinja GRUB
3 Bhatisa yedu bootable USB kwenguva yekutanga kuti uedze iyo
4 Windows 10 Kuisa USB + Maitiro ekuisa Bash
4.1 Gadzirira iyo Windows 10 kuisa USB
4.2 Isa uye shandisa Bhash muWindows 10
Zano redu rekugadzira Bootable USB
Unogona kushandura nhanho dzatinokudzidzisa iwe kune zvaunofarira kuisa akasiyana masisitimu anoshanda anokufarira kana maturusi akasiyana. Unogona kutsiva mazano edu neakasiyana kwazvo anokodzera basa rako kana zvaunoda. Zvakare iwe isu tinotsanangura maitiro ekugadzira multiboot, iyo yakaoma kunzwisisa, asi kana iwe uchida kuisa chete kugovera kana sisitimu yekushandisa, unogona kuzvitungamira kuburikidza nematanho edu, asi chete isa OS.
Zano redu, kubva kuLxA ndeyekuisa Ubuntu pane iyo pendrive pamwe neHiren's Boot CD, izvo zvatinowana neizvi kuve nehukama neyakajairika kugoverwa kwebasa redu uye nemidziyo yakawanda inobhururuka yekugadzirisa michina yedu, kuongorora hutachiona kana kuita mamwe macheki. Nekudaro, sezvandinotaura, iwe unogona kutsiva Ubuntu kune chero kumwe kugovera kwaunoda kana chero imwe sisitimu yekushandisa yaunoda. Izvo zvakafanana neHiren's Boot, chitsiva nemamwe maturusi akadai seRescatux kana Super GRUB Disk, ine Microsoft Windows system mune mbiri mbiri ine distro kana chero chaunoda. Iwe unoda zvinopfuura zviviri here? Zvakanaka, enda kumberi zvakare ...
Izvo zvinodiwa zvinhu nekuti izvi zvauchazoda ndeizvi:
Chikwata chine Kugovera kweLinux (Unogona kuzviita kubva kune mamwe masisitimu anoshanda seMicrosoft Windows uchishandisa zvishandiso senge Easyboot).
Un pendrive kana USB ndangariro, inogona kuve yekunze hard drive zvakare.
Iyo software MULTISYSTEM, kunyangwe dzimwe nzira dzaigona kushandiswa.
ari Mifananidzo yeIO yemashandisi ekushandisa kana maturusi izvo zvatinoda kusanganisira.
Uye zvirokwazvo nguva kuzviita…
Gadzira iyo Bootable USB neako aunofarira distros
Hongu ikozvino, tinotsanangura danho nedanho maitiro ekugadzira yako bootable USB nemahurongwa akasiyana, iwe uchaona kuti zviri nyore sei:
Dhawunirodha uye gadza MULTISYSTEM
MULTISYSTEM Izvo zvichatibatsira isu kunyatsoisa ese masisitimu anoshanda kana zvishandiso zvinobhowa zvatinoda mukati medu USB ndangariro uye kugadzirisa GRUB nemazvo:
Unzip pasuru yekubvisa iyo .sh script inouya mukati.
Iye zvino unogona kuimhanya kubva kune iyo terminal ne sudo ./install-depot-multiboot.sh kana kuzviita kubva ku graphical interface nekudzvanya kaviri pa install-depot-multiboot.sh.
Menyu inofanira kunge yakaratidzirwa maunofanira kusarudza Mhanya muTerminal kana kana iwe wakazviita zvakananga kubva kune iyo terminal, saka haufanire kutevedzera nhanho iyi ... Nenzira, inokumbira iwe password password nekuti inoda rombo.
Iye zvino unogona kuvhura MULTIBOOT kubva pane yekushandisa menyu kana kubva kunyaradzo inoshandisa zita rayo.
Kana isu tavhura MULTIBOOT, isu tinoona kuti iri graphical mode chirongwa, iri intuitive uye iri nyore kushandisa, ndosaka tasarudza iyo. Muhwindo huru iwe unogona kusarudza iyo USB ndangariro matiri kuda kuita oparesheni yedu uye kunyangwe chinja mutauro wechirongwa.
Iye zvino zvese zvagadzirira kutanga basa chairo rakanaka:
Rimwechete yakasarudzwa USB memory uye tinosimbisa. Izvo zvinotizivisa kuti GRUB iri kuzoiswa uye isu tinomirira kuti iitwe.
Ichatipa imwe imwe skrini nyowani uko kwatinogona kudhonza uye kudonhedza iyo ISOs (mubhokisi rinoti Dhonza / Kudonhedza ISO / img) yemaitiro edu ekushandisa kana zvishandiso zvinobhuroka, zviri nyore kudaro. Imwe sarudzo ndeyekuvatsvaga kubva pane yako menyu. Isu takambotora mifananidzo iyi yeIOO, mune ino Ubuntu 16.04 uye Hiren's Boot CD 15.2.
Kana tangozviwedzera, tichaona kuti iyo MULTIBOOT pachayo ichaita kuisa zvakanaka pane USB. Mirira kuti riitwe uye dzokorora nhanho kakawanda semaitiro aunoda kuwedzera.
Kana tangowedzera zvese zvinodikanwa ku USB memory yedu, iwe uchaona kuti pane iyo MULTIBOOT skrini pane mamwe ma tabo akadai seTest, Isina-Mahara, Nezve, Menyu, kwatinogona gadzirisa iyo bootloader gadziriso:
Dzvanya pa iyo MENU tebhu by MULTIBOOT.
Ingersa mukati GRUB marongero.
Muhwindo idzva repop-up iwe unogona chinja mavara mavara, GRUB kumashure uye wedzera yechinyakare mufananidzo. Kana iwe usiri wepamberi mushandisi, zvirinani usachinje grub.cfg, menyu.lst, uye syslinux.cfg.
Zvino anotipa sarudzo dzakawanda, pakati pavo tinogona kuona kuti GRUB yedu yanga iri sei kana iwe uchida kuzviita.
Tinopedza ndokutora USB yedu kubva pachiteshi zvakanaka.
Bhatisa yedu bootable USB kwenguva yekutanga kuti uedze iyo
Unotova nazvo! Zvino kwauya iyo litmus test, test kana yako bootable USB ichishanda neiyo system / s yawakaisa mariri. Izvo zviri nyore sekudzvanya iyo pendrive kana yako USB ndangariro (sezvo inogona zvakare kuve yekunze hard drive) uye kutanga komputa. Rangarira kuti kuti rishande iwe unofanirwa kuisa yako BIOS kana UEFI uye kugadzirisa izvo zvakakosha zveBoot Priority menyu.
Zvichienderana nemidziyo, kana kuti zvirinani, zvinoenderana nechiratidzo kana modhi ye BIOS / UEFI yechikwata chako unofanirwa kuchipinza neimwe nzira Kazhinji, iwe unofanirwa kumanikidza Delete kiyi kana uchinge wabatidza michina kakati wandei uye iwe uchaona nzira yekuwana iyo Setup menyu. Mune mamwe makomputa unofanirwa kudhinda Esc kana F2, unogona kubvunza bhuku reyako mamaboard kana laptop kuti uzive zvekutsikirira mune imwe neimwe kesi. Kana iwe usinayo, unogona kuiwana kubva pawebhusaiti yemugadziri kana kungoenda kuGoogle kuti uone kuti ndeipi kiyi chaiyo.
Mune mamwe masisitimu zvakare inobvumidza iwe kuti uwane zvakananga iyo Bhuti menyu nekudzvanya F12 kana F8. Kana iwe usina mukana wekunanga kupinda muBoot menyu, ipapo unofanirwa kupurudzira kune iyo tebhu uchishandisa miseve yekhibhodi kuti ufambe kuburikidza neBIOS / UEFI uye chinja chinokosheswa kuisa yako USB sedhiraivho yekutanga kuti ive yekutanga imwe chete iyo inowana iyo yekushandisa system kubhoot. Kana iwe uine kusahadzika, ini ndatozvitsanangura zvakadzama muchinyorwa chedu chekuti ungaisa sei ne multiboot Ubuntu 16 uye Windows 10. Paunenge wapedza, pinda F10 kuti ubude uye chengetedza shanduko ...
Et voilà, une yako bootable USB yakagadzirira! Inofanira kuoneka kwauri iyo GRUB menyu nemasystem anoshanda kana sarudzo dzekubhoot ... Sarudza yaunoda uye inotanga.
Windows 10 Kuisa USB + Maitiro ekuisa Bash
Gadzirira iyo Windows 10 kuisa USB
Kunyangwe pano zvanzi Windows 10Iwe unogona zvakare kuzviita neimwe vhezheni yeMicrosoft yekushandisa system, kunyangwe Bash ichingoshanda chete kana iwe uine iyi yazvino vhezheni yeWindows. Izvo zvinodiwa zvinhu ndezvi:
PC ne Internet connection
Pen drive USB 4GB kana zvimwe.
Imagen Windows 10 ISO (32 kana 64-bit)
Kutanga, matanho acho Ndizvo:
Download el software inodikanwa kupisa zvakanaka ISO kuUSB. Iwe unofanirwa zvakare kuwana yepamutemo Windows webhusaiti uye kurodha pasi Windows 10 kana iwe usati uine ISO.
Isa chirongwa chakadzingwa.
Vhura chirongwa kana kuiswa kwapera.
Mune Bhurawuza tsvaga iyo ISO mufananidzo Windows 10 uye wedzera iyo usati wadzvanya Inotevera. Kana iwe ukawana kukanganisa, iwe ungatofanira kushandisa iyo Rufus software. Kana izvo zvaunoda kuisa Windows 10 zvakananga paUSB sezvatakaita muchikamu chakapfuura neUbuntu neHiren, unogona zvakare kushandisa chirongwa cheEasyBoot.
Zvino pinda gadzira USB Device.
Ivo vanozokuratidza izvo zvishandiso USB yakabatana, sarudza iyo yaunoda kushandisa kana paine akati wandei wobva wadzvanya paKutanga kutevedzera.
Mirira kuti ipedze maitiro uye meseji yeBooteable USB chishandiso inoita sekuvhara chirongwa ichi.
Iwe unotova neiyo bootable USB chishandiso kuti ubhure iyo, yakambosarudzwa kukosheswa kwakakodzera muBIOS / UEFI sezvakatsanangurwa pamusoro uye uteedzere matanho eiyo Windows 10 mugadziri. ona yedu dzidziso.
Isa uye shandisa Bhash muWindows 10
Kubvisa chidimbu ichi che Ubuntu mukati meWindows 10, nhanho-nhanho maitiro ndeye:
Saina chirongwa ichi Windows Insider kubva pane ino webhusaiti kuti ugamuchire zvakasarudzika.
Enda ku Windows Update.
Ipapo Zvimwe Zvinyorwa.
Dhinda «Get Insider inovaka".
Wobva washandisa iyo yekuvandudza modhi muWindows Gadziriso, «Yevanogadzira» uye «Programmer modhi".
Tarisa uone zvekuvandudzwa kwavari kuti vatore nekuisa nekumisikidza sisitimu yako paunokurudzirwa.
Pakati pekugadzirisa kunofanirwa kuve iyo inosanganisa Bhash ine Windows 10.
Zvino, kana watangazve, enda kuDanho rePaneru, Zvirongwa uye "Gonesa kana kudzima maficha eWindows."
Tarisa chimwe chezvinyorwa zvinoti «Windows Subsystem ye Linux»Uye shandisa. Ichakukumbira iwe kuti utangezve, zviite uye ndizvozvo.
Iye zvino unogona kushandisa bash, Kuti uite izvi, tsvaga ("bash") mudhizaini yekutsvaga uye iwe uchave unokwanisa kuisarudza ...
Rangarira kusiya zvaunotaura, ingave mamwe mazano, kusahadzika kana chero chimwe chinhu chaunoda kutaura nezve ichi chinyorwa. Ndinovimba yakubatsira uye nekuita zvinangwa zvako ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekugadzira bootable USB
Ndine dambudziko, mukumisikidzwa kweFedora (Gnome Nharaunda) ini ndinowana "ERROR: XTERM" uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika muLinux Mint (Cinnamon Environment), iko kukanganisa kumwe kunoonekwa mune zvese kugoverwa. Mumwe munhu angandiudza kuti chii chiri kuitika?
Iwe unofanirwa kuisa xterm uyezve multisystem.
Zvakanaka, ini ndiri mune imwechete kesi sajhonatan ine linux mint 17 cinamon. Mune maitiro ekumisikidza anovhura repository yekuvandudza hwindo asi rinogara imomo uye hariratidze kana paine chero chaunoda kuwedzerwa.
Zvisinei, ndinotenda nekuda kweiyo tuto. Zvakanaka. Uye ini handichakuudzi iwe kana ndichigona kuitisa kuti ishande ;-)
Pindura kuna Blackduke
Mhoro, sekunzwisisa kwandinoita iwe unogona kunge uine windows uye ubuntu pane imwecheteyo usb? Ndakaedza asi multisystem inondiudza kuti windows 10 usb haitsigirwe parizvino :(
Edza kutevera maitiro aya paLubuntu 14.04, Isa MultiSystem, chirongwa ichi chinovhura nemazvo, asi hachizive iyo USB Disk, ichaiswa pa / media, saka handigone kugadzira iyo Bootable USB, kusvika zvino.
Pindura kuna jesusguevarautomotriz
wakagadzirisa dambudziko here?
Manheru akanaka, ndakaedza kanoverengeka kubhuroka kubva kuUSB hard disk ine imwecheteyo "Missing system kukanganisa" mhedzisiro. Ndakaita maitiro ese kubva pakutanga nguva dzese. Ndatenda.
Manheru akanaka, ndaita maitiro kakati wandei nemhedzisiro imwechete, kana yaedza kubhuroka kubva kuUSB (hard disk) meseji "isipo yekushandisa system" inoonekwa. Unogona kundibatsira here?
Susana Castillo akadaro
Mhoroi, kubva pandakapora komputa yangu ndanga ndichiedza kushandura masisitimu ayo uye ini ndoda kuyedza, asi handizive kwandinogona kurodha pasi multisystem, unogona kundiudza kwandingaite kurodhaunira?
Pindura kuna Sussana Castillo
Ini ndinoda motoooooooos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 11111
beto ledesma akadaro
inorema kupfuura zvandiri kuda kuisa… ..pera data.
Pindura beto ledesma
Manheru akanaka, ndakaedza kakati wandei kutanga iyo inoshanda system kubva kune yangu bootable USB Asi ini ndinowana kukanganisa uye ini handikwanise kuzvigadzirisa, Kupotsa Error System. Ini ndakatevera dzidziso yese asi ini handikwanise kugadzirisa dambudziko iri. Kune avo vane dambudziko iri, ini ndawana imwe sarudzo inogona kuigadzirisa, mu dandemutande iri tsanangura muchidimbu.
Sezvaitarisirwa, uye chidzidzo chechishanu chandakaverenga, HAZVINA KUSHANDA
Asi zvine musoro, iri Linux
Kuti uite chimwe chinhu chiri muwindos chinokutora iwe mabhatani maviri
MuLinux, inoitwawo mukudzvanya kaviri, asi hauzvizive nekuti hauzive maturusi anopihwa neLinux mune izvi, saka kana, pane kudzidza kutanga, isu tinotanga kutsoropodza, kuti ndeyemahara. ...
Pano, muLinux, pane WoeUSB, Rosa, usb-musiki-gtk ... Une zvakawanda zvingasarudzwa (zvose zvine GUI), asi iwe waisatombozviziva ... Ehe, shoropodza, zvakanyanya. ...
Chinhu chakareruka, kana ukashandisa Debian-based distro, ndeye dd if = nameofisoperosinspaciosotedaraerror.iso ye = / dev / sdx apo x iri tsamba iyo USB ndangariro yako inogara mune hierarchy yemudziyo (a, b, c….) , unomirira kuti ipedze uye voila, ichishanda. (Hakusi kuti waisa zita rekuti iso pasina nzvimbo pano, kuti kana iso rine zita rine nzvimbo, tanga wachinja zita, kuti usiye nzvimbo uye wozokopa (zita re iso) mu raira uye waita, zero matambudziko).
Hapana mhosva, asi pane zviri nyore sarudzo:
1) Iyo nyowani vhezheni yeWoeUSB ine GUI
2) Isa iyo boot disk musiki ane kugovera senge Debian, Ubuntu, Sparky…. Ne sudo apt-tora kuisa usb-musiki-gtk iwe watove nayo yakaiswa. Iyo ine chete drawback imwe chete, haitsvaki .iso mafaira asi .img (Mune dzimwe distros, yakatogadziriswa uye inotarisa .iso). Asi zviri nyore seizvo, kana uchitsvaga .iso faira unoona kuti haigone kuwanikwa muforodha yaunayo, iwe unoshandura kuwedzera kune .img uye voila, pamwe chete iyo inoiwana uye inogadzira mufananidzo. kwauri mundangariro / HD USB.
3) Rosa (Rosa Image Writter), iapp inouya kubva kuRussia distro inodaidzwa iyo uye iyo inokutendera iwe kugadzira autoboot USB ndangariro.
4) Kana uri kushandisa Debian-based distro, ita izvi, kana iyo iso yaunoda kuendesa ku USB ine nzvimbo muzita rayo, itumidzezve, kubvisa nzvimbo idzodzo, ikozvino ona kuti sdX ndiyo pendrive yako (inogona kuva sdb, sdc ... zvichienderana nemadhiraivha aunawo muPC yako). Nyora dd kana = nombredelaisoinspaciosotedaraerror.iso ye = / dev / sdx Ndinodzokorora, iyo x inomiririra vara reusb memory yako uye ndiro vara raunofanira kuisa pachinzvimbo che x. Iwe unomirira kuti ipedze uye watove neyako bootable USB yakagadzirwa.
Rufus chishandiso cheWindows chinokutendera kuti ugadzire mhando dzakasiyana dzebhootable midhiya yemadhiraivha ekunze, senge USB madhiraivha uye SD makadhi. Kushanda kwakasiyana-siyana kunoita kuti zvikwanise kugadzira dhisiki uye kuisa Linux, Windows uye kunyange dhisiki mifananidzo yemahara, yakavakirwa muchishandiso.